Amamaski Wokuvikela Isitolo esidayisa yonke impahla, Ama-Respirator Face Mask Manufacturers & Suppliers | Inkanyezi eluhlaza okwesibhakabhaka
Le nkampani yibhizinisi elikhokhelwa amazwe angaphandle eligxile ekukhiqizweni kwamamaski okuvikela.
I-Civil Grade Ppe Face Mask & Umshini wokuphefumula
Ukukhiqizwa okuhle kwezinto ezikhethekile
Ubuso beBlue Star brand-proof, deodorant kanye ne-anti-microtoxic busks zokuvikela kanye namaski wokuvikela ochungechunge akhiqizwa yinkampani akhiqizwa ngezinto ezikhethekile, ukuvikelwa okunzima, okuhle nokuqinile.
Izimaski zokuvikela izipontshi ze-Blue Star brand, deodorant kanye ne-anti-microtoxic kanye nezembozo zikakotini ezikhiqizwa yinkampani zenziwa ngezinto ezikhethekile, ukuvikelwa okunzima, okuhle nokuqinile; imaski yokuphefumula, indwangu yendwangu engalahliwe, imaski yokuvikela enezinhlangothi ezintathu, izifihla-buso ze-Butterfly, i-KN95, buso obumise okwenkomishi, amasiki ochungechunge lwezemidlalo, buso obungenabo ubufakazi obubandayo, buso obusobala namanye amaski ezokwelapha; phakathi kwabo, imaski yezingane enezinhlangothi ezintathu yakhelwe kancane futhi imibala iyakhethwa.
I-3 Ply Medical mask
Izinto eziyisisekelo ezisetshenziswa eBlue Star ngovoti, irabha noma ipulasitiki ebangeni eliphakeme. Ukuzikhethela kuncike ekusetshenzisweni, ngokwesibonelo, ngaphakathi noma ngaphandle. Isimo sezulu naso sidlala indima ebalulekile njengezindawo ezinomswakama ophezulu nomswakama. Uhlelo lwethu lwe-QC oluqinile kanye nohlelo lokuphatha lingaqinisekisa ikhwalithi ephezulu ye. Ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kusiza abantu ukuthi banciphise amahora abo okusebenza futhi kusiza ukubakhulula emisebenzini yokudinwa nasemisebenzini esindayo.
I-KN95 / FFP2 Isiphendulisi Esingaphenduleki
Isiqeshana sempumulo esinezinhlangothi ezintathu uKN95
Imaski yokuvikela ukwelashwa
Imaski evikelayo yezokwelapha
Imaski enobukhulu obuthathu ngaphandle kwesiqeshana sekhala
Le nkampani inesitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-ISO9001, ilayisense yokukhiqiza imishini ekhethekile yokuvikela abasebenzi, isitifiketi semaki yokuphepha yomsebenzi okhethekile. Ilayisense yokukhiqiza imishini yezokwelapha, isitifiketi sokubhaliswa kwemishini yezokwelapha. Isitifiketi se-FDA, CE, esisohlwini lwabamhlophe boMnyango Wezohwebo, Izitifiketi Zangaphandle kanye ne-Registered Medical Import and Export Association.
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-50 engumsunguli wemboni yemaski eFujian. Umsunguli akakaze akhohlwe inhloso yakhe yasekuqaleni, wakhumbula umsebenzi wakhe, wahola abantu beBlue Star ukuba baqhubekele phambili, futhi walwela ukuvikela izimpilo zabantu abasebenza phambili. Ngo-2020, kwaqubuka lesi sifo. Abantu baseBlue Star abasikhohliwe isimo esiwubhadane futhi abantu abanonya banothando. Ukuphendula umyalo kahulumeni wokuthi baqhubeke nomsebenzi ngosuku lokuqala lonyaka, baba ngamabhizinisi amakhulu wokuthenga nokugcina eMkhandlwini Wombuso.
Oda kusuka eMalaysia
I-oda elivela eMalaysia: uvemvane oluncane kakhulu, olunesiqeshana samakhala, indwangu encibilikisiwe eyenziwe ngokwezifiso, nezinto zokwakha ze-nano, ezinemisebenzi ekhethekile. Ipakishwe ngawodwana ezikhwameni zepulasitiki zezokwelapha, ezinomoya ophezulu.
Isikhungo sezimo eziphuthumayo saseCzech sihlome ngemaski kaNafu
Isikhungo sezimo eziphuthumayo saseCzech sinama-maski kaNafu
I-Xiamen Blue Star Enterprise Co, Ltd. esungulwe ngo-1987.
Ethembele eChina Pharmaceutical University, eFujian Medical University naseQilu Medical College yaseShandong University, leli bhizinisi ngokuhlanganyela lasungula isikhungo sokucwaninga ngesayensi nobuchwepheshe esifundeni iXiang'an ukwenza ukuthuthukiswa kwezimboni nokwandisa umugqa womkhiqizo webhizinisi kusuka kumaski wokuzivikela, okokuqala amadivayisi wezokwelapha kanye nekilasi lesibili kuya ezintweni zokuvimbela ezokwelapha ezisezingeni lesithathu njengezinsimbi nezinto ezisetshenziswayo, okwenza ipulatifomu yokukhiqiza izinto ezisetshenziswayo zezokwelapha.